२० उच्च-गुणवत्ता खुला स्रोत फोटो वेबसाइटहरू क्रिएटिव अनलाइन
जसरी हामी क्रिसमसमा पहिले नै हेरिसकेका छौं, कुन वेबसाइटबाट फिर्ता ल्याउने राम्रो तरिका उच्च गुणवत्ता खुला स्रोत फोटोहरू ताकि तपाईं सक्नुहुन्छ तपाइँको बिभिन्न प्रोजेक्टहरू र कार्यहरूमा प्रयोग गर्नुहोस्.
यस पटक म २० लिएर आउँछु नयाँ वेबसाइटहरूaमहान क्रिसमस उपस्थित र जसमा तपाईले लगभग सम्भव विषयवस्तु फेला पार्न सक्नुहुन्छ। वास्तविकता यो हो कि अधिक र अधिक ब्लगहरू फोटोग्राफरहरूको साथ देखा पर्दछ जसले उनीहरूको फोटोग्राफहरू ठूलो ढाँचामा र उत्कृष्ट गुणवत्तामा साझा गर्दछन्।
3 हरेक स्टक फोटो
6 ढुrow्गा कौ
7 डिजाइनर चित्रहरु
12 सुरुवातमा स्टक फोटोहरू
13 स्टक छवि पोइन्ट
14 स्टक फोटोहरू नि: शुल्क
19 stok तस्वीर
20 प्रामाणिक स्नैपहरू
मोर्ग्युफाइलसँग एक छ 330० हजार भन्दा बढी छविहरूको डाटाबेस उच्च रिजोलुसनमा जुन नि: शुल्क प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईंसँग सबै प्रकारका डिजाइनरहरू र इलस्ट्रेटरहरूबाट सम्भव सबै प्रकारका चीजहरू छन्।
व्यावसायिक प्रयोगको लागि नि: शुल्क रचनाकारको श्रेय सराहना गरिन्छ, राउमरोटसँग अद्भुत फोटोहरू छन् जम्मा 521२१ तस्बिरहरूको भण्डारको साथ।
हरेक स्टक फोटो
Un छवि खोजी ईन्जिन र योसँग नेभगेट गर्न सजिलो छ कि संगठित ईन्टरफेसको साथ २ million मिलियन भन्दा बढीको साथ फोटोहरूको बृहत्तर संग्रह पनि छ।
,300००,००० भन्दा बढि नि: शुल्क फोटोहरू, भेक्टरहरू र चित्रणहरूको साथ Pixabay लगभग असीम फन्ट हो सबै प्रकारका छविहरूको। उच्च रिजोलुसन आकारहरू डाउनलोड गर्न तपाई एक प्रयोगकर्ताको रूपमा दर्ता गर्नु पर्छ।
Splashbase छ विभिन्न स्रोतहरूबाट फोटोहरूको ठूलो भण्डार र यो तिनीहरूलाई एक पूर्ण इन्टरफेसको साथ एक धेरै स्वच्छ तरीकामा देखाउँदछ।
उच्च गुणस्तर खुला स्रोत फोटोको साथ अर्को रोचक वेबसाइट। सदस्यता संग तपाईं नयाँ फोटोहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ हरेक हप्ता।
कुनै पनि प्रयोगको लागि प्रत्येक दिन उच्च रिजोलुसन फोटोहरू, चाहे व्यावसायीक वा व्यक्तिगत। कुनै एट्रिब्युसन आवाश्यक छैन.
एक महान भण्डार Jeeshoots संग छ मोबाइल उपकरणको लागि भविष्यवाणीत्यसो हो भने, यदि तपाईंलाई यस प्रकारको छविहरू आवश्यक छ भने, यसको लागि उत्तम वेबसाइट।
फोटोका लागि क्यामेरा समय को लागी बिभिन्न timeतुहरु मार्फत देखाउनुहोस् वर्षको सुन्दर क्याप्चर जसले कसैलाई उदासीन छोड्दैन।
Finda.Photo सँग एक छ तपाईंको वेबसाइटमा छविहरू फेला पार्न उत्सुक तरिका रंगहरूको प्रयोग, वा कोटि पनि एक राम्रो विकल्प को माध्यम बाट। यो राम्रो वेबसाइटमा सहरी हाइलाइट गर्नुहोस्।
ठूला निर्माताबाट नि: शुल्क फोटोहरू बाहेक, फोटोशप ट्यूटोरियल र बनावट पनि उपलब्ध छन्। संग 51000 छविहरूउनीहरूको साइटबाट सुरू गर्ने कुनै पनि विज्ञापनबाट नडराउनुहोस्।
सुरुवातमा स्टक फोटोहरू
यदि तपाईं खोजी गर्नुहुन्छ एप्पल ब्रान्डको साथ खुला स्रोत छविहरू यो तपाइँको मनपर्ने वेबसाइट हुनेछ। जे होस्, तिनीहरूसँग सबै कुराको लागि पूर्वनिर्देशन छ जुन एक कार्यालयको तत्व हो।
स्टक छवि पोइन्ट
एक फोटोग्राफर व्यावसायिक वा नि: शुल्क प्रयोगको लागि यस वेबसाइटबाट उसका सबै फोटोग्राफरहरू डिस्पोज गर्दछ। प्रत्येक महिना २० थप्नुहोस् आफ्नै संग्रहबाट।
स्टक फोटोहरू नि: शुल्क
संग एक वेबसाइट कोटि द्वारा क्रमबद्ध फोटो को भीड र जसमा तपाइँले डाउनलोड पहुँच गर्न दर्ता गर्नुपर्नेछ। फेसबुक प्रमाण पत्रको साथ उही। लायक।
बिगफोटो २००० देखि भएको छ नि: शुल्क उच्च रिजोलुसन छविहरू प्रदान गर्दै, चाहे व्यावसायीक वा व्यक्तिगत प्रयोगको लागि।
कपकेकसँग फोटोग्राफर जोनस निल्सन लीसँग केही छ विभिन्न थिमको साथ सुन्दर फोटो। अपरिहार्य।
उच्च-गुणवत्ताको फोटोहरू तीन डच फोटोग्राफरहरू द्वारा ल्याइएको। छविहरूको प्रत्येक एक धेरै राम्रो दृश्य उपचार संग विषयवस्तु को सबै प्रकार।
El वेब डिजाइनर को काम करोलीना ग्राबोवस्की। पूर्ण रिजोलुसन छविहरूको लागि एक धेरै राम्रो स्रोत जुन व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सदस्यता संग तपाईं सक्नुहुन्छ प्रत्येक २० दिनमा १० नि: शुल्क उच्च रिजोलुसन फोटोहरू पहुँच गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो वेबसाइटबाट सबै फोटोहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
भलेन्टी ड्राइ, फोटोग्राफर र प्रामाणिक स्न्यापहरूको निर्माता, तपाईंलाई लिन्छ ईमेल free नि: शुल्क उच्च-गुणवत्ता फोटो हर हप्ता। त्यस क्षणमा तपाईले आफ्नो इ-मेलको साथ सदस्यता लिनुभयो, तपाई पछिल्लो प्याकको डाउनलोड पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। यसको गुणवत्ता अविश्वसनीय।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » छविहरू » २० उत्कृष्ट गुणवत्ता खुला स्रोत फोटोग्राफी वेबसाइटहरू
जोन अल्बर्ट भन्यो
शुभ प्रभात, हामी एक वेबसाइट बनाउँदैछौं र हामी केहि छविहरू राख्न चाहन्छौं जुन तपाईंले यहाँ उल्लेख गर्नुभएका वेबसाइटहरूमा देखा पर्दछ, प्रश्न यो हो कि यदि उनीहरूको प्रतिलिपि अधिकार छ वा हामीले वेबमा स्रोतहरूको उल्लेख गर्नुपर्दछ। धन्यबाद
जोन अल्बर्टलाई जवाफ दिनुहोस्